﻿﻿	အပြင်ဘက်သုံး ကွန်ဒုံး | Find My Method
အပြင်ဘက်သုံး(အမျိုးသား)ကွန်ဒုံးသည် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီအပါအ၀င် လိင်မှကူးစက်သောရောဂါများကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပြီး ဆေးညွှန်းမလိုပါ၊ စျေးသိပ်မကြီးပဲ (သို့) အခမဲ့ရနိုင်ပြီး သုံးရလွယ်ကူပါတယ်။
ထိရောက်မှု- စနစ်တကျသုံးပါက လူ ၁၀၀ လျှင် ၉၈ ယောက်ကို ကိုယ်ဝန်ကို တားဆီးဖို့ စီမံနိုင်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် လူအများစုဟာ ကွန်ဒုံးကို စနစ်တကျမသုံးပါ၊ အဲလိုဆိုရင်တော့ အသုံးပြုသူ လူ ၁၀၀ မှာ ၈၂ ယောက်ပဲ ကိုယ်ဝန်ရှောင်ရှားနိုင်ပါမယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ – များသောအားဖြင့်မရှိ။ ရာဘာဓါတ်တမျိုး latex ဒါမှမဟုတ် သုတ်ပိုးသေဆေးကို မတဲ့ရင်သာ
အားထုတ်ရမှု- မြင့်မားသော။ လိင်ဆက်ဆံတိုင်း အသစ်တစ်ခု သုံးဖို့လိုပါမယ်။
အပြင်ဘက်သုံးကွန်ဒုံးများ – အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးလို့ လူသိများပြီး – ကိုယ်၀န်ဆောင်မှုကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောကူးစက်ရောဂါများကိုကာကွယ်ဖို့ လူကြိုက်အများဆုံးပုံစံတွေထဲကတစ်ခုပါ။ လိင်တံပေါ်လျှောချစွပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ အပြင်ဘက်သုံး(အမျိုးသား)ကွန်ဒုံးဟာ လိင်အင်္ဂါ၊ စအို ဒါမှမဟုတ် ပါးစပ် အပြင်ဘက် သုက်ပိုးကိုမရောက်အောင်တားပေးထားလို့ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောကူးစက်ရောဂါတွေဖြစ်ဖို့ နည်းစေတယ်။ (အမျိုးသမီးယောနိ (သို့) စအိုအတွင်း ထဲ့သုံးရတဲ့ ကွန်ဒုံးတွေလဲ ရှိတယ်။) အပြင်ဘက်သုံး(အမျိုးသား)ကွန်ဒုံးဟာ ရာနှင့်ချီပြီး ပုံစံစုံအရွယ်စုံ လာပါတယ်။ အဲဒါတွေကို lube ပါတာ မပါတာ စသဖြင့် ဝယ်နိုင်တယ်။
သုတ်ပိုးသေဆေး ဒီ ကွန်ဒုံးတွေက သုက်ပိုးကိုသေစေတဲ့ဓာတ်တမျိုးနဲ့ ချောမွတ်အောင် လုပ်ထားတယ်။ ဒါတွေနဲ့ ပါးစပ်(သို့)စအိုမှာ လိင်ဆက်ဆံဖို့ အကြံမပြုပါ။
သုတ်ပိုးသေဆေးမပါသော သင် ဒါမှမဟုတ် သင့်အဖော်ဟာ သုတ်ပိုးသေဆေးကို မတဲ့ရင် သုတ်ပိုးသေဆေးမပါတာရွေးပါ။ ကွန်ဒုံးတွေက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအတော်နည်းပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစားက ပိုနည်းပါတယ်။
Latex ရာဘာဓါတ်တမျိုး Latex ကွန်ဒုံးတွေက ၈၀၀% ထိဆန့်နိုင်တယ်။ ဒါတွေဟာ အသုံးအများဆုံးကွန်ဒုံးတွေဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကို အဆီပါတဲ့ချောဆီတို့ နဲ့ မသုံးပါနဲ့။ ဆီအခြေခံချောဆီက ကွန်ဒုံးကို ပေါက်တာ ကျွတ်ထွက်တာဖြစ်စေနိုင်လို့ ကိုယ်၀န်နဲ့ လိင်ကကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေကို ရနိုင်ခြေများသွားမယ်။
Non-latex. Latex ရာဘာဓါတ်ကိုမတဲ့ရင် ဆီအခြေခံချောဆီကိုနှစ်သက်ရင် latexမပါတဲ့ ကွန်ဒုံးကိုရှာပါ။ အဲဒါတွေကို အများအားဖြင့် polyurethane၊ တခြားနည်းပညာမြင့်ဒြပ်ပစ္စည်း ဒါမှမဟုတ် သဘာဝသိုးရေကနေ ပြုလုပ်တယ်။
STI ကာကွယ်မှု။ အပြင်ဘက်သုံး(အမျိုးသား)ကွန်ဒုံးအများစုဟာ အိပ်ချ်အိုင်ဗွီအပါအဝင် လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေ (STIs) ကို ကာကွယ်ပေးတယ်။ သိုးရေကွန်ဒုံးကတော့ STI ကာကွယ်ဖို့ စိတ်မချရပါ။ သိုးရေကွန်ဒုံးက သုတ်ပိုးကိုတားပေမဲ့ ရောဂါတွေကို မတားနိုင်ပါ။
အပြင်ဘက်သုံး(အမျိုးသား)ကွန်ဒုံးဟာ အားထုတ်ဖို့ လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ လိုတယ်။ ထိရောက်ဖို့ရာ လိင်ဆက်ဆံတိုင်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသားလိင်တံပေါ် စနစ်တကျလျှောချစွပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အချို့နေရာတွေမှာ အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့အမျိုးသားပါတနာတွေကို အချိန်တိုင်းစနစ်တကျသုံးပေးဖို့ တောင်းဆိုရတာ ခက်ခဲနိုင်တယ်။
ကြာကြာလိင်ဆက်ဆံရစေနိုင်တယ်။ အပြင်ဘက်သုံး(အမျိုးသား)ကွန်ဒုံးဟာ မတဲ့တာကို လျှော့ချပေးနိုင်တယ်။ အချို့ကိစ္စ‌တွေမှာ ဒါကကောင်းပြန်ရော။ (သင်ဒါမှမဟုတ်သင့်အဖော်က အချိန်မတန်ခင် သုက်လွှတ်တဲ့ပြဿနာရှိရင် ကွန်ဒုံးတွေက လိင်ကိစ္စ ကိုပိုကြာစေနိုင်တယ်။ )
စျေးပေါပြီး ရှာဖို့ လွယ်တယ်။ အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးတွေဟာ စျေးမကြီးပဲ တခါတလေ အလကားပင် ရနိုင်ပါတယ်။ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ရနိုင်ပါတယ်။ ရွေးချယ်စရာ မျိုးစုံရှိပါတယ်။
ဆေးညွှန်းမလိုပါ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူဆီမသွားနိုင်ရင် (သို့) မသွားချင်ရင်၊ အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးကို အမြဲသုံးနိုင်သည်။
latex မတည့်ပါက မသင့်လျော်ပါ။ latex မတည့်ရင် latexမပါတဲ့ အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးကို ရှာသုံးရပါမယ်။ latexမပါတဲ့ ကွန်ဒုံးကိုရှာမရရင် အခြားနည်းလမ်းကိုကြိုးစားပါ။
အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးတွေဟာ သုံးရတာအတော်ကို လွယ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုစနစ်တကျသုံးစွဲရမလဲဆိုတာ အောက်မှာ အကြံပြုထားပါတယ်။ ကွန်ဒုံးကိုပဲသုံးမယ်ဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အကြိမ်တိုင်းမှာ သုံးဖို့သတိရရပါမယ်။
စစချင်း မရှက်ပါနှင့်။ အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးကို စွပ်ရတာ အမျိုးသမီးထဲမထည့်ခင် လိင်စိတ်တက်ကြွလာစေပါတယ်။ လိင်ကိစ္စကို အဖော်နဲ့ပြောဆိုရတာ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံတုံး ကွန်ဒုံးသုံးပြီး အရသာပိုစေတာကို ဆွေးနွေးပါ။
ကွန်ဒုံးမသုံးခင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်ကို စစ်ဆေးပါ။ ကွန်ဒုံးတွေကလဲမကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ သက်တမ်းကုန်တဲ့ကွန်ဒုံးတွေက ပေါက်ပြဲလွယ်တယ်။
လိင်တံဟာ မိန်းမကိုယ်နဲ့မထိခင် ကွန်ဒုံးစွပ်ထားပြီးပါစေ။ သုက်မထွက်ခင်လိင်တံကထွက်တဲ့အရည်မှာ – ယောက်ျားရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အချိန်ကသုက်ပိုးတွေ ပါဝင်နိုင်တယ်။
တစ်ခါတောင့်တိုင်း ကွန်ဒုံးတစ်ခု ကွန်ဒုံးအပို ရနေပါစေ။ ကွန်ဒုံးကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မသုံးပါနဲ့။
အထုပ်ကိုဖောက်တုန်းမှာ ကွန်ဒုံးကိုပါမဖြဲမိအောင် သတိထားပါ။ ပေါက်ပြဲသွားရင်၊ ကျွတ်ဆပ်တင်းကျပ်နေရင် လွှင့်ပစ်လိုက်ပါ။ နောက်တစ်ခုသုံးပါ။
ကွန်ဒုံးထဲကို အဆီအခြေမခံတဲ့ချောဆီ တစက်နှစ်စက် ထဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာကွန်ဒုံးကိုလျှောစွပ်ဖို့ကူညီပေးပြီး သင့်အဖော်ကိုလဲ ပိုပြီးအရသာရှိစေပါတယ်။
အမျိုးသားကအရေဖျားထိပ်ဖြတ်ထားခြင်းမရှိပါက ကွန်ဒုံးစွပ်မချခင် ထိပ်အရေပြားကိုဆွဲချထားပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
သုတ်ရည်စုမဲ့အဖျားနေရာကို လက်မဝက်လောက်အပိုနေရာ ချန်ထားပြီး အဖျားက လေကိုဖိညှစ်ပေးလိုက်ပါ။
လေပူဖောင်းရှိရင် လျောချပါ။ လေဖောင်းနေရင် ကွန်ဒုံးပြဲစေနိုင်တယ်။
ဆန္ဒရှိရင် ပွတ်တိုက်ပွန်းတာ မဖြစ်အောင် ချောဆီ lube ပိုသုံးပါ။
လိင်တံကို ပျော့မလာမီ မိန်းမအင်္ဂါမှ ထုတ်ထားပြီး ချွတ်ပါ။
ချွတ်တဲ့အခါမှာ ကွန်ဒုံးအ‌ရင်းကိုဖိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှ ကွန်ဒုံးထဲကအရည် ဖိတ်မကျအောင် ကာကွယ်ပေးမှာပါ။
ကွန်ဒုံးကို ပစ်လိုက်ပါ။ ကလေးတွေ ဒါမှမဟုတ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးဝေးထားပါ။ အိမ်သာထဲကို မပစ်/ရေဆွဲမချပါနဲ့။ ဒါဟာ ရေပိုက်အတွက်မကောင်းပါ။
ယောက်ျားရဲ့လိင်တံကို အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါနဲ့ထပ်မထိခင် ဆပ်ပြာနှင့်ရေဆေးပေးသင့်ပါတယ်။
ကောင်းတဲ့အချက်များ – အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံး နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သာမကသင်၏လိင်မှုဘဝအတွက် ကောင်းမွန်သောအရာများစွာရှိသည်။ 
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီအပါအ၀င် STIs လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ မှကာကွယ်သည်
Latexနဲ့မတဲ့တာ မရှိရင် အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေပါ
လူ ၁၀၀ တွင် ၁ မှ ၂ ဦး သာမတည့်ပါ။ ကိုယ်ကအဲဒီအထဲပါနေရင် latexမပါတဲ့ ကွန်ဒုံးကို အမြဲရှာသုံးနိုင်ပါတယ်။
တချို့လူတွေက ချောဆီ အမှတ်တံဆိပ်အချို့နဲ့ မတဲ့တာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်ရင် တခြားအမှတ်တံဆိပ်ကို စမ်းကြည့်ပါ။
အမျိုးသားတချို့က ကွန်ဒုံးဟာ ခံစားမှုကိုလျော့စေတယ်လို့ ‌စောဒကတက်ကြပါတယ်။
အရက်မူးနေရင် ကွန်ဒုံးသုံးဖို့မေ့နေနိုင်ပါတယ်။ ရလွယ်အောင်ထားရင်တော့ သတိရနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကိုကူညီဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဒီမှာရှိပါတယ်။ အကယ်၍ ဒါကို မကြိုက်သေးဘူးလို့ခံစားရရင်၊ ကျွန်တော်တို့မှာအခြားနည်းလမ်းတွေအတွက် အကြံဥာဏ်တွေရှိပါတယ်။ သတိရလိုက်ပါ : အကယ်၍ နည်းလမ်းများကို ပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်ပါက၊ သင်ပြောင်းနေစဉ် ကာကွယ်ထားရန် သေချာပါစေ။
အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံး ဟာ အမျိုးသားကို ခံစားရတာ လျော့စေသလား 
အမှတ်တံဆိပ်မတူတာ ဒါမှမဟုတ် အမျိုးအစားမတူတာ တချို့ကို စမ်းကြည့်ပါ။ အပါးလွန်“Ultra-thin” (သို့) ခံစားလွန်“ultra-sensitive” အဖြစ်ရောင်းတဲ့ကွန်ဒုံးတွေကို စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ IUD, implant, ထိုးဆေး၊ အဝိုင်းကွင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ကပ်ခွာပြား လိုမျိုး အချိန်နည်းနည်းလောက် “မေ့ထားနိုင်တဲ့” နည်းကို ပြောင်းသုံးကြည့်ပါ။
အဲဒီနည်းလမ်းတွေက STIs လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ ကို ကာကွယ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ STIs လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်ချင်ရင် အမျိုးသမီးသုံးကွန်ဒုံး ကိုရွေးပါ။
implant; IUD; ကပ်ခွာပြား; အဝိုင်းကွင်း; ထိုးဆေး
အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးက ဘာလို့ ကျွတ်ထွက်တာ ပေါက်ပြဲတာ ဖြစ်ရတာလဲ။ ”
ကွန်ဒုံးမသုံးခင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်ကို သေချာ စစ်ဆေးပါ။ ဒါ့အပြင် အထုပ်ကိုမပျက်စီးတာသေချာအောင် စစ်ဆေးပါ။
လိင်တံပျော့ပြီးခါမှ ဆွဲထုတ်တာကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ ကပ်ခွာပြား၊ ဆေးလုံး၊ အဝိုင်းကွင်း၊ IUD၊ implant၊ ဒါမှမဟုတ် ထိုးဆေး စတဲ့ ခြားခံမရှိတဲ့ နည်းလမ်းကို စစ်ဆေးရန် လိုပေမည်။
အဲဒီနည်းလမ်းတွေက STIs လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ ကို ကာကွယ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ STIs လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်ချင်ရင်တော့ အမျိုးသမီးသုံးကွန်ဒုံး} ကိုရွေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် သင့်အတွက်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးကို ထပ်မံရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ မတူတဲ့ အမျိုးအစားအများကြီး ရှိပါတယ်။
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်-အမျိုးသမီးသုံးကွန်ဒုံး၊ implant; IUD; ကွန်ဒုံး; ကပ်ခွာပြား; ဆေးလုံး; အဝိုင်းကွင်း; ထိုးဆေး .
ကွန်ဒုံးသုံးရာမှာ နှစ်ခုထပ်သုံးတာဟာ တစ်ခုထဲသုံးတာထက် ပိုမကောင်းပါ။ ကွန်ဒုံး နှစ်ခုထပ်သုံးရင် ပွတ်တိုက်မှုပိုလာလို့ ကွန်ဒုံးပြဲနိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ အလွန်တရာစိတ်ချရလိုပါက ကွန်ဒုံးနှင့် အခြားထိရောက်တဲ့ သန္ဓေတားနည်းကို အသုံးပြုပါ။
ကိုယ့်အဖော်က Latexနဲ့မတဲ့ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။ 
Latexနဲ့ မတဲ့တာ ရှားပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ့်အဖော်က Latexနဲ့မတဲ့ရင် ကိုယ်၀န်ရော လိင်ကကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေကိုပါကာကွယ်တဲ့ Latexမပါတဲ့ကွန်ဒုံးရှာပါ။ သိုးရေကထုတ်တဲ့အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးက တော့ ကိုယ်၀န်ကာကွယ်ဖို့ရွေးစရာြဖစ်ပေမယ့် STI လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ မကာကွယ်နိုင်ပါ။
အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးက သက်တမ်းကုန်နေရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
ကွန်ဒုံးမသုံးခင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်ကို အမြဲစစ်ဆေးပြီး အထုပ်ကိုလဲ သေချာစစ်ပါ။
ကွန်ဒုံးကောင်းတာသေချာအောင် အထုပ်ကိုလက်နဲ့ဖိကြည့်ပါ။ လေနဲနဲရှိတာ ခံစားသိနိုင်ပါတယ်။ လေရဲ့ကူရှင်ရှိတာ ခံစားရရင် အထုပ်မပေါက်သေး (သို့) မပျက်စီးတဲ့သဘောပါ။
အထုပ်ကိုလက်နဲ့ဖိကြည့်ရင်း ချောဆီကြောင့် လျှောထွက်တဲ့ အသိကိုပါ ခံစားနိုင်ပါတယ်။ (ချောဆီမပါတဲ့ ကွန်ဒုံးများအတွက်တော့ ဒီလိုမနေပါ။) ကွန်ဒုံးတွေကိုအပူထဲထားရင် ဒါမှမဟုတ် ပေါက်နေရင် ချောဆီခန်းပြီး ကွန်ဒုံးခြောက်သွေ့အားပျော့ကာ သုံးတဲ့အခါပေါက်ပြဲလွယ်သွားပါတော့တယ်။
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်-implant; IUD; ဆေးလုံး; အဝိုင်းကွင်း; ထိုးဆေး
မိမိမှာ အနံ့ပါတဲ့ အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးပဲရှိရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။ 
တချို့လူတွေကပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဘို့ အနံ့ပါတဲ့ ကွန်ဒုံးကို နှစ်သက်တယ်။ ဒါတွေက လည်ချောင်းမှာ STIs လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်တယ်။
တချို့ အနံ့ပါတဲ့ ကွန်ဒုံးမှာ သကြားပါဝင်တယ်။ အဲဒီသကြားတွေကြောင့် ရောဂါဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဘာသကြားမှမပါတဲ့ ကွန်ဒုံးကိုရှာပါ။
အမျိုးသားကကွန်ဒုံးသုံးရတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။ သူက မာမလာဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ကွန်ဒုံးက သိပ်ကြပ်နေရင် မသက်မသာရှိနေရင် ယောက်ျားရဲ့လိင်တံ ပျော့သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါက မင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲ ကွန်ဒုံးကြောင့်ပါ။ ရှက်စရာမလိုပါ။
သိပ်ကြပ်နေရင် မသက်မသာရှိနေရင် ကွန်ဒုံးကို အခြားအမျိုးအစားတွေ ပြောင်းသုံးကြည့်ပါ။
ကွန်ဒုံးတွေနဲ့အတူ ချောဆီကို အသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါသလား။ 
ကွန်ဒုံးတွေနဲ့အတူ ချောဆီကိုသုံးရင် အရသာပိုရှိစေပါတယ်။ မသက်မသာရှိတာ ကွန်ဒုံးအဆင်မပြေဖြစ်တာတွေ လျော့သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ကွန်ဒုံးအတော်များများမှာ ချောဆီပါကြပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အပိုနဲနဲထဲ့သုံးလဲ ရပါတယ်။ အဆီပါတဲ့ချောဆီတို့ (အနှိပ်ဆီ၊ hand lotion, and Vaseline) ကိုရှောင်ပါ၊ အဲဒါတွေကြောင့် ကွန်ဒုံးပြဲတာဖြစ်နိုင်လို့ပါ။